Ihe Nlereanya 6 nke Ngwa Ahịa Iji Artificial Intelligence (AI) | Martech Zone
Amamịghe echiche (AI) na-aghọ ngwa ngwa otu n'ime okwu buzzwords ahịa kachasị ewu ewu. Ma maka ezi ihe kpatara ya - AI nwere ike inyere anyị aka ịmegharị ọrụ ugboro ugboro, hazie mbọ ahịa ahịa, ma mee mkpebi ka mma, ngwa ngwa!
Mgbe a bịara n'ịbawanye visibiliti ika, AI nwere ike iji rụọ ọrụ dị iche iche, gụnyere ịzụ ahịa influencer, mmepụta ọdịnaya, njikwa mgbasa ozi mgbasa ozi, ọgbọ ndu, SEO, ndezi ihe oyiyi, na ndị ọzọ.
N'okpuru ebe a, anyị ga-eleba anya na ụfọdụ ngwa AI kachasị mma maka ndị na-ere ahịa nwere ike imezi mgbanwe mgbasa ozi, mee ka arụmọrụ dịkwuo elu, na ịkwalite visibiliti webụsaịtị:
AI-Driven Marketing ahịa
IMAI bụ usoro mgbasa ozi mmetụta nke AI na-eme ka anyị nwee ike ịchọta ndị na-eme ihe ziri ezi maka ika, soro ọrụ ha, ma tụọ ROI. Isi ihe dị na IMAI bụ ngwa nchọpụta AI siri ike nke nwere ike ịchọ na ịchịkọta data na ndị na-emetụta ihe kachasị na Instagram, Youtube na TikTok.
AI na-enye ohere maka ụdị ahịa ịchọta na lekwasịrị anya ọtụtụ ndị na-emetụta niche n'ime ụlọ ọrụ ha. Ikike AI nke ịchọpụta ndị na-eme ihe ngwa ngwa na-enye IMAI ohere inwe otu n'ime ọdụ data kacha sie ike.
Amra Beganovich, onye isi oche nke ụlọ ọrụ ahịa dijitalụ Amra & Elma
Dịka ọmụmaatụ, onye na-emepụta ụgbọ ala nke chọrọ ịchọpụta ndị na-eme ihe ụgbọ ala nwere mmasị na ụgbọ ala egwuregwu ga-enwe ike ịchọta ndị nnọchianya niche nwere ike iji AI na-enweghị iji aka chọọ ha na mgbasa ozi ọha. Ikike a itinye aka na nka nke kacha dabara na njirimara njirimara nke ika na-enyere aka ịbawanye mgbanwe ndị na-eme ihe ma na-ebuli mgbasa ozi ROI.
Nweta ngosi IMAI
AI-Driven Mmepụta Ihe
Quillbot bụ onye enyemaka ide ihe na-akwado AI nke nwere ike inye aka mepụta ọdịnaya ka mma, ngwa ngwa. Ọ na-eji nhazi asụsụ okike (NLP) inyocha ederede wee nye ntụnye maka otu esi eme ka mpempe akwụkwọ ka mma. Dịka ọmụmaatụ, Quillbot nwere ike ịtụnye mkpụrụokwu ma ọ bụ akpaokwu ọzọ, tụọ otu okwu, ma ọ bụ ọbụna nye ndụmọdụ ụtọasụsụ.
Iji AI iji nyere aka na imepụta ọdịnaya na-enye anyị ohere ịkwalite ahịa ahịa na nhazi nke weebụsaịtị anyị yana ọdịnaya mgbasa ozi ọha. Dịka ọmụmaatụ, AI na-enye anyị ohere ịbawanye mmasị nke ibe ọdịda ma ọ bụ blọọgụ site n'ịtụ aro na okwu ma ọ bụ okwu ndị nwere ike ịda ụda na-agwụ ike.
Eliza Medley, onye njikwa ọdịnaya maka Hostinger
Quillbot nwere ọtụtụ atụmatụ nwere ike inye aka gụnyere ntuziaka ụdị, onye na-enyocha plagiarism, na akara ọgụgụ. AI nwere ike ịnye ntụzịaka na idegharị akụkọ ma ọ bụ ahịrịokwu ma mee ka ha na-adọrọ mmasị karị.
AI-Driven Njikwa Mgbasa Ozi
MeetEdgar bụ ngwa ọrụ njikwa mgbasa ozi ọha na-akwado AI nke na-enyere aka ịmepụta mgbasa ozi mgbasa ozi. Ọ na-enye anyị ohere ịmepụta bọket ọdịnaya dabere na isiokwu, isi okwu, ma ọ bụ ọbụna hashtags. Akụrụngwa ahụ na-ejupụta bọket ndị ahụ na ọdịnaya sitere na isi mmalite dị iche iche, gụnyere ndepụta RSS, blọọgụ, na akụkọ.
Ịnọdụ n'elu usoro na-enye ụdị ohere ịmepụta ọdịnaya bara uru maka ndị na-ege ha ntị. Site na iji AI iji kpokọta data metụtara ụlọ ọrụ kacha ọhụrụ, anyị nwere ike ịkwalite atụmatụ mgbasa ozi mmekọrịta anyị ka anyị na ndị na-ege anyị ntị jikọọ nke ọma.
Reynald Fasciaux, COO nke Studocu
MeetEdgar na-enye anyị ohere ịhazi ọkwa anyị tupu oge eruo, ọ na-ahụkwa na ebisara ọdịnaya anyị n'oge kacha mma maka itinye aka. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na anyị nwere post blọọgụ nke anyị chọrọ ịkekọrịta na mgbasa ozi mgbasa ozi, MeetEdgar ga-enye anyị ohere ibu ụzọ bulite ya maka akụkọ ụlọ ọrụ na-adọrọ mmasị na nke na-adịbeghị anya, mgbe ahụ ọ ga-ekesa post ahụ n'otu oge dabere na ọrụ ndị na-ege ntị. ụkpụrụ.
Gbalịa Edgar n'efu
AI-Driven -edu ndú Ọgbọ
LeadiQ bụ ngwa ọrụ ọgbọ ndu AI na-enyere anyị aka ịchọta na tozuo ndu, ngwa ngwa.
LeadiQ na-eji ọtụtụ isi mmalite data dị iche iche chọta ụzọ, gụnyere mgbasa ozi ọha, bọọdụ ọrụ, na akwụkwọ ndekọ aha azụmahịa. Ozugbo LeadIQ chọtara ụzọ, ọ ga-eji NLP nyochaa ọnụnọ ọnlaịnụ ndị ndu wee tụọ ụzọ dabere na ohere ha nwere mmasị na ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ anyị.
Iji AI megharịa mbọ mmepe azụmaahịa na-enye ohere iji mee ka ịdịmma mmekọrịta dị n'etiti ụdị na ndị ahịa sikwuo ike. Ọ na-enye ohere ilekwasị anya karịa n'akụkụ mmadụ nke mmekọrịta ndị ahụ site n'ichekwa oge na akwụkwọ ntuziaka na mgbe ụfọdụ usoro nchọpụta ndị ahịa na-esi ike.
Berina Karic, onye njikwa ahịa na Ụlọ ọrụ mgbasa ozi kacha emetụta
Enwere ike iji LeadiQ guzobe mkpọsa nzụpụta ndu akpaka, yabụ anyị nwere ike ịga n'ihu na-esonyere ndị ndu anyị ọbụlagodi na ha adịbeghị njikere ịzụrụ ozugbo. Dịka ọmụmaatụ, anyị nwere ike ịhazi ngwanro ahụ iji zipu usoro ozi-e n'usoro ka oge na-aga, ma ọ bụ ọbụna kpọọ ha oku ma ọ bụrụ na ha azaghị ozi ịntanetị gị.
Malite na LeadiQ n'efu
Njika ihe nchọta AI na-anya
Moz Pro bụ njikarịcha ihe nchọta nke AI kwadoro (SEO) ngwá ọrụ na-enyere aka melite ogo webụsaịtị na engines ọchụchọ.
Moz Pro na-eji ọtụtụ isi mmalite data dị iche iche iji nyochaa webụsaịtị wee nye ntụnye maka otu esi emeziwanye SEO ika.
Moz na-enye anyị ohere ịbanye na usoro ihe isi ike dị ala, wee chọpụta mkpụrụokwu niche nke ndị asọmpi nwere ike ileghara anya. Nke a na-enye ohere ịmepụta atụmatụ ịre ahịa ọdịnaya nke dabere na usoro nyocha kama ịkọ nkọ, ya bụ ịmepụta posts ma ọ bụ ibe ọdịda nke na tiori dị mma mana ọ nwere ike ọ gaghị enweta okporo ụzọ.
Chris Zacher, Ọdịnaya Marketing Strategist na Intergrowth
Moz Pro na-enyere aka n'ịchọta mkpụrụokwu kacha arụ ọrụ nke ọma iji lekwasịrị anya, na-enye ntụnye maka ịkwalite aha weebụsaịtị na mkpado meta, yana soro ọkwa dị elu karịa oge. Ọ nwere ọtụtụ atụmatụ ndị ọzọ nwere ike inye aka melite SEO nke ika, gụnyere ngwá ọrụ ụlọ njikọ, ihe nyocha saịtị, na ngwá ọrụ nyocha asọmpi.
Bido nnwale Moz Pro gị
AI-Driven Editing foto
Luminar AI bụ onye nchịkọta akụkọ foto na-eji AI iji mee ka ndezi foto dị mfe ma mee ka ọ nweta ya maka ndị mbido ma ọ bụ ndị na-ese foto na-achọ ka ha dezie ngwa ngwa n'ogo. Ọ na-enye ndị ọrụ ikike ịmepụta ihe oyiyi dị ka Photoshop site na ịpị ole na ole site n'ịgụ ihe oyiyi ahụ na-akpaghị aka na ịchọpụta akụkụ dị iche iche nke ya, gụnyere ndabere, ọdịdị ihu, uwe, na ndị ọzọ.
Luminar na-enye ohere maka ndị ọkachamara na-abụghị Photoshop ka ha mepụta ọdịnaya pụrụ iche nke nwere ike ịnweta ntinye aka na ntụgharị. Naanị obere ọpịpị ole na ole, anyị nwere ike ịhazigharị ndabere nke onyonyo, akpụkpọ ahụ dị larịị, mee ka anya na-egbuke egbuke, ma rụchaa ọrụ ndị ọzọ nke ga-achọ ka oge edezi ọtụtụ awa.
llija Sekulov, Digital Marketing & SEO na Onye na-ebu ozi
Lelee Luminar AI
Ọdịnihu nke AI na Marketing
Ngwá ọrụ AI nwere ike imeziwanye mbọ ịzụ ahịa site n'ikwe ka ndị na-ere ahịa na-eme ka arụmọrụ dịkwuo mma, na-abawanye visibiliti, kwalite mgbanwe, na ndị ọzọ! Ha na-aghọ ngwa ngwa nke mbọ ahịa anyị kwa ụbọchị ma nwee ike gbasaa n'ọtụtụ ọrụ anyị na-arụcha mgbe anyị na-etolite ika. Site na iji AI iji kwalite mkpọsa anyị, anyị nwere ike rụọ ọrụ arụ ọrụ, hazie ahịa, wee mee mkpebi kacha mma ngwa ngwa!
Tags: aiai ngwaọrụAmra na ElmaAmamịghe echicheakụrụngwa ọgụgụ isiberina karicchris zacherihe okike aicontent Marketingahịa ọdịnaya aiedgaredezi aiimaiahịa ahịainfluencer marketing aiintergrowthnduaha Sekulovluminar aionye na -eziga oziizutemoz proNlpfoto aifoto edeziPhotoshopquillbotReynald Fasciauxsearch engine njikarịcha aiseo aielekọta mmadụ mediasocial media aiStudocutop influencer ahịa ụlọ ọrụ
Lucidchart: Imekọ ọnụ wee jiri anya nke uche hụ Wireframes gị, Charts Gantt, Usoro ire ere, Automation Marketing, yana njem ndị ahịa.